Mid ka mid ah taliyaashi ugu caansaa dowlada Syria oo goostay
Updated About:348 days ago 0
Mid ka mid ah janaraalada aadka ugu dhawaa madaxweynaha dalka Syria oo lagu magacaabo Gen Manaf Tlas ayaa ka goostay dowlada uu cadaadiska saaranyahay isla markaana ku biiray mucaaradka.
Brig Gen Manaf Tlas ayaa la xaqiijiyey inuu u baxsaday dalka Turkiga isaga iyo qoyskiisa, waxaana taasi ay jab weyn ku noqoneysaa xukuumada Al Asad oo haatan la liiceysa dagaalo iyo fara gelin xaga dibada ah.
Wasiirka arrimaha dibada dalka France Laurent Fabius ayaa ku tilmaamay arintaasi dhabar jab daran oo soo gaaray dowlada Syria.
Mr Fabius ayaa sheegay bixitaanka janaraalka in ay muujineyso in rajiimka Mr Assad uu sii liicayo isla markaana uusan sugneyn.
Warar la isla dhaxmarayey maalmahan ayaa sheegayey in ninkan uu dowlada ka goostay bishi March, hase yeeshee hadiiba ay dhabowdo waxay uu noqonayaa sarkaalki ugu weynaa oo ka goosta dowlada tan iyo marki uu kacdoonka ka bilowday Suuriya bishi March ee sanadkaan.
Website taageero dowlada oo lagu magacaabo Syriasteps ayaa sheegay in Gen Tlas uu baxsaday isaga oo intaasi ku daray in talabaadaasina aysan aheyn mid aad muhiim u ah oo aan waxba soo kordhineyn.
Brig Gen Tlas, ayaa la rumeysanyahay inuu ku jiro da,da afartameeyada, waa abaanduule guuto ka mid ah ciidamada Ilaalada Jamhuuriga, isaga oo dhalinyara ah ayuu tababar milatari kala qeybgalay madaxweyne Assad.